Madaxweyne Xasan Sheekh oo baarlamaanka u sheegay in shirka London uu yahay mid dalka Soomaaliya lagu kaalmeynayo – idalenews.com
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Shiiq Maxamuud ayaa khudbad uu u jeediyay baarlamaanka waxa uu ugaga hadlay arrimo kala gedisan oo ku saabsan xaalada dalka Soomaaliya.
Khudbada uu u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka ayaa waxa uu ku tilmaamay shirka lagu wado in toddobaadka soo socda lagu qabto magaalada London uu yahay mid lagu kaalmeynayo dalka Soomaaliya isla markaana casuumada dadka ka qeybgalaya ay si wadajir ah u bixiyeen isaga iyo r/wasaaraha dalka Britain.
“Shirka London waxaa casuumadiisa fidiyay aniga oo ah madaxweynaha Soomaaliya iyo R/wasaaraha dalka Britian waxaana uga hadleynaa Qorshaheena amaanka, cadaalada, maareynta maaliyada iyo aragtideena siyaasadeed ee la doonayo in dalka dib loogu hanto” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Mar uu ka hadlayay madaxweynaha xirnaashada wadooyinka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay howlgalo lagu sugayo amaanka waxana uu madaxweynuhu qiray in dowladda ay ogtahay dhibaatooyinka ka jira wadooyinka xiran waxa uuna intaasi raaciyay in dowladda ay ka hortageyso dhibaatooyin loo geysto shacabka.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa ka hadlay xaalada magaalada Kismaayo iyo mowqifka dowladda Soomaaliya waxa uunta xusay in kismaayo uu ka socdo shir lagu doonayo in lagu dhiso dowladda Goboleed iyadoona dowladda ay agoshahay in la sameeyo maamul goboleed.
“Dowladda kama hor imaankarto dastuurka dalka balse maamul waliba oo la sameynayo waa in uu waafaqsanadaa nidaamka dastuurka mana ogolaan doono nidaam hal dhinac ah, waxaana rabnaa in shacabka iyo dowladda maamul ay ku qanacsantahay la dhisaa” ayuu yiri madaxweynaha dalka.